Kasị na-elekọta mmadụ nchọpụta na analọg afọ gburu kwesịrị ekwesị usoro ziri ezi itule. Dị ka ihe atụ, na a nyochaa nke ụlọ nyocha nwere na ịgụnye gụnyere ihe karịrị 100,000 mmadụ, Plott (2013) chọpụtara naanị otu oghom omume, a na-amụrụ ndị were iwe n'ihi nke adịkwa ego na aku na uba egwuregwu. Dị ka na aga na atọ digital afọ ka ihe atụ ndị Otú ọ dị, ndị nchọpụta na-enwe ugbu usoro ziri ezi ihe isi ike ndị dị iche iche n'otú ihe dị n'oge gara aga. Generalizing si atọ ndị a ọmụmụ, m na-eche na isi nsogbu na ndị na-ebughị na-eme nnyocha na-enwe bụ na ike na-agbanwe ngwa ngwa karịa iwu, iwu, na norms. More kpọmkwem, na-eme nnyocha-mgbe mgbe na mmekota na ụlọ ọrụ ndị na ọchịchị-enwe ihe ike n'ebe sonyere karịa n'oge gara aga. Site n'ike, M pụtara nanị inwe ike maka ime ihe ndị na-enweghị nkwenye ha ma ọ bụ ọbụna mmata. The ihe m na-ekwu banyere ike abụ ma na-edebe ihe ha omume ma ọ bụ idebanye aha ha nwere. Dị ka ike nke na-eme nnyocha na-edebe na perturb na-amụba, ọ dịghị ihe Ẹkot abawanye na ihe doo anya banyere otú ya na ike ga-eji. N'ezie, nnyocha ga-ekpebi otú na-egosipụta ike ha dabeere ekwekọghị na overlapping iwu, iwu, na norms. Na-doro anya, nke a apụtaghị na kasị digital afọ research bụ unethical. N'ezie, nyere ọnọdụ a, m na-eche na ndị nchọpụta e gosiri n'ụzọ dị ịrịba ama ezi uche. The Nchikota dị ike ike na-edochaghị anya na ụkpụrụ nduzi, Otú ọ dị, na-ewepụta ezi ihe n'obi na-eme nnyocha n'ọnọdụ siri ike.
Ọ bụ ezie na gị onwe gị nwere ike ọ gaghị na-eche karịsịa dị ike na okwu nke gị ike ime ihe ndị mmadụ, na-eme nnyocha-mgbe mgbe na mmekota na ụlọ ọrụ ndị na ọchịchị-ndị nwere ike idebe na perturb ndị na-enweghị nkwenye ha ma ọ bụ mmata. Dị ka ihe atụ, were ya na-esonụ na mmadụ gburugburu na Ndekọ ihe niile ha na-eme. Nke a ga-agụnye nsuso ihe dị ka ebe ha na-aga, ihe ha na-azụ, bụ ndị na ha kwurịta okwu, ma ihe ha na-agụ. Nlekota ndị dị ka nke a na analọg afọ na-abụrụ ndị stof nke ọchịchị nnukwu Amawaputala. Ugbu a, ihe a niile ozi na-routinely na-akpaghị aka dere banyere ọtụtụ nde na-adịghị anya pụrụ ịdị ọtụtụ ijeri ndị mmadụ. Ọzọkwa, n'ihi na ihe niile nke ozi a-echekwa digitally, ọ dị mfe iji detuo, search, na-ebunye, jikọrọ ọnụ, na ụlọ ahịa. Ndị ọzọ okwu, ihe a na-routinely mere taa ga-ujo na itu n'anya Agha Nzuzo spy ụlọ ọrụ dị ka KGB, CIA, na Stasi. Ọzọkwa, ọtụtụ n'ime ihe a akparamàgwà nsuso na-emenụ na-enweghị nghọta zuru ezu banyere ndị a na-surveilled.
A vivid atụ na-ezughị ezu captures ọnọdụ a nke uka surveillance bụ panopticon. Mbụ chọrọ ke mbubreyo narị afọ nke 18 site Jeremy Bentham dị ka ihe ije maka ụlọ mkpọrọ, ndị panopticon bụ anụ ahụ pụta ìhè nke surveillance (ọgụgụ 6.3). The panopticon bụ a okirikiri ụlọ na ụlọ dabeere gburugburu a Central ụlọ nche. Onye ọ bụla enyene a ụlọ nche ike na-edebe ihe omume nke mmadụ niile na ụlọ. Na, oké, ndị mmadụ na ụlọ nwere ike ọ bụghị nlezianya nyochaa onye na ụlọ nche. Onye na ụlọ nche ntem-adịghị ahụ anya-ọhu-uzọ (Foucault 1995) .
Ọgụgụ 6.3: Design si panopticon mkpọrọ, mbụ chọrọ site Jeremy Bentham. Dị n'etiti, e nwere ihe adịghị ahụ anya-ọhu-uzọ onye nwere ike na-edebe ihe omume nke onye ọ bụla na-apụghị hụrụ. Na-eru site Willey Reveley, 1791. Isi Iyi: Wikimedia Commons .
N'ezie, digital surveillance bụ ọbụna ihe oké karịa a mmadụ na a ụlọ nche n'ihi na ọ pụrụ ịmịpụta a zuru ezu dijitalụ ndekọ nke omume na nwere ike ịchekwa ruo mgbe ebighị ebi (Mayer-Schönberger 2009) . Ezie na e nwere adịghị ma a zuru ndekọ nke ihe nile àgwà ụmụ mmadụ mechakwara gbakwụnyeghachi akwụkwọ ụfọdụ n'ime a-nwe nchekwa data, ihe na-akpụ akpụ isi n'ụzọ ahụ. Na, na ije ga-akacha-anọgide na ka anya dị ka ike nke sensọ anọgide na-agbasa, na-eri nke nchekwa na-aga n'ihu ka ibelata, na ndị ọzọ nke ndụ anyị ghọọ kọmputa-onye ogbugbo.
Ka ọtụtụ na-elekọta mmadụ na-eme nnyocha a-nwe nchekwa data nwere ike ibido ada na-akpali akpali, ma ọ nwere ike N'ezie, a ga-eji ọtụtụ ihe dị mkpa nnyocha. Legal ọkà mmụta Otú ọ dị, nyere a dị iche iche aha na a ọkà nchekwa data: nchekwa data nke mbibi (Ohm 2010) . Ihe e kere eke nke ọbụna na-ezughị ezu nwe nchekwa data nwere ike a chilling mmetụta na-elekọta mmadụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndụ ma ọ bụrụ na ndị na-abụ na-adịghị njikere na-agụ ụfọdụ ihe ma ọ bụ atụle ụfọdụ isiokwu (Schauer 1978; Penney 2016) . E nwekwara ihe ize ndụ na ndị nna ha ukwu nchekwa data, mgbe kere maka otu nzube-ekwu ezubere iche mgbasa ozi-ike otu ụbọchị a ga-eji a dị iche iche na nzube, a ọnọdụ na-akpọ nke abụọ na-eji. A jọgburu ihe atụ nke unanticipated sekọndrị-use mere n'oge Agha Ụwa nke Abụọ mgbe ọchịchị onuogugu data-, nna ukwu nchekwa data nke oge ahụ-e ji ikwado mgbukpọ na itịbede megide ndị Juu, Roma, na ndị ọzọ (Isiokwu 6.1) (Seltzer and Anderson 2008) . The statisticians na-achịkọta data n'oge udo ugboro fọrọ nke nta N'ezie bu ezi ihe n'obi. Ma, mgbe ụwa gbanwere-mgbe ndị Nazi bịara ike na Germany na mba ndị agbata obi-a data nyeere nke abụọ na-eji na-ebughị n'obi. Ozugbo a-nwe nchekwa data dị adị, ọ bụ ike na-atụ anya ndị nwere ike isi biri na ya na otú ọ ga-eji.
Isiokwu 6.1: otu ebe onu ogugu data na usoro e abuana ma ọ bụ nwere aka n'ihe ndị ruuru mmadụ abuses. Nke a okpokoro mbụ weere na Seltzer and Anderson (2008) , na m gụnyere a subset nke ya na ogidi. Lee Seltzer and Anderson (2008) maka ozi ndị ọzọ gbasara nke ọ bụla na Nsonye ibiere. Ụfọdụ, ma ọ bụghị ihe niile, nke a okwu ikpe gụnyere unanticipated sekọndrị ojiji.
Ezubere iche ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ ìgwè dị iche iche
Ruuru mmadụ imebi ma ọ bụ ekekerede ala ebumnuche
Australia 19 & narị afọ nke 20 Aborigine Population ndebanye Amanye Mbugharị, na ihe nke mgbukpọ
China 1966-76 Bad-na klas si malite n'oge omenala mgbanwe Population ndebanye Amanye Mbugharị, kwadoro ime ihe ike n'ìgwè
France 1940-44 Juu Population registration, pụrụ iche censuses Amanye Mbugharị, mgbukpọ
Germany 1933-45 Juu, Roma, na ndị ọzọ ọtụtụ Amanye Mbugharị, mgbukpọ
Hungary 1945-46 German nationals na ndị akuko German n'asụsụ 1941 Population Census amanye Mbugharị
Netherlands 1940-44 Juu na Roma Population ndebanye usoro Amanye Mbugharị, mgbukpọ
Norway 1845-1930 Samis na Kvens Population censuses mkpocha agbụrụ
Norway 1942-44 Juu Special onuogugu & chọrọ bi aha mgbukpọ
Poland 1939-43 Juu N'ụzọ bụ isi pụrụ iche censuses mgbukpọ
Romania 1941-43 Juu na Roma 1941 Population Census Amanye Mbugharị, mgbukpọ
Rwanda 1994 Tutsi Population ndebanye mgbukpọ
South Africa 1950-93 African na "Acha" popualtions 1951 Population Census & bi ndebanye Apartheid, Voter disenfranchisement
United States narị afọ nke 19 Native America Special censuses, bi registers amanye Mbugharị
United States 1917 -Enyo enyo na iwu a gbara ndị dara iwu 1910 Census Nchọpụta & ikpe nke ndị na-ezere ndebanye
United States 1941-45 Japanese America 1940 Census Amanye Mbugharị & omumu oru
United States 2001-08 -enyo enyo na-eyi ọha egwu NCES nnyocha ndị e mere & administrative data Nchọpụta & ikpe nke ụlọ & mba-eyi ọha egwu
USSR 1919-39 Minority bi Dị iche iche bi censuses Amanye Mbugharị, ntaramahụhụ nke ajọ mpụ ndị ọzọ
Nkịtị na-elekọta mmadụ na-eme nnyocha bụ nnọọ, nnọọ anya n'ebe ihe ọ bụla dị ka na-eke chilling mmetụta na ọha mmadụ na ọ bụ ikere òkè na ụmụ mmadụ ziri ezi abuses site sekọndrị-use. M na-họọrọ ka tụlekọọ isiokwu ndị a, Otú ọ dị, n'ihi na m na-eche na ha ga-enyere-elekọta mmadụ na-eme nnyocha na-aghọta na oghere site na nke ụfọdụ ndị ga-ahụ ọrụ ha. Ka anyị laghachi Ire, Ties, na Time oru ngo, n'ihi na ihe atụ. Site merging ọnụ zuru ezu na granular data site na Facebook na zuru ezu na granular data si Harvard, na-eme nnyocha kere ihe itunanya ọgaranya anya nke onodu n'obodo na omenala ndụ nke ụmụ akwụkwọ (Lewis et al. 2008) . Ka ọtụtụ na-elekọta mmadụ na-eme nnyocha na nke a yiri ka nna ha ukwu nchekwa data, nke nwere ike mee ihe ọma. Ma, ụfọdụ ndị ọzọ, ya anya ka mmalite nke nchekwa data nke mbibi na e kere na-enweghị nkwenye nke sonyere. The Ire, Ties, na Time oru ngo malitere na 2006, na ihe ọmụma ndị na-eme nnyocha nwere abụghị karịsịa onwe. Ma, ọ bụrụ na ị na-atụ anya a bit ị nwere ike iche na ndị a okwu ndị yiri ka inwe ihe mgbagwoju. Olee ụdị digital Mozis ga-eme nnyocha na-enwe ike rụọ banyere ụmụ akwụkwọ na 2026 ma ọ bụ 2046?
Tụkwasị na nke a uka onyunyo, na-eme nnyocha-ọzọ na mmekota na ụlọ ọrụ ndị na ọchịchị-ike-esiwanye n'usoro itinye onu na ndụ ndị mmadụ iji ike enweghị usoro na-achịkwa nwere. Dị ka ihe atụ, na mmetụta uche Contagion, ndị na-eme nnyocha debara aha 700,000 ndị mmadụ na nnwale na-enweghị nkwenye ha ma ọ bụ mmata. Na, dị ka m kọwara n'Isi nke 5 (na agba nwere), a ụdị nzuzo conscription nke ndị keere òkè n'ime nnwale bụghị ihe ọhụrụ. Ọzọkwa, ọ dịghị achọ nkwado nke nnukwu ụlọ ọrụ. Dị ka m kọwara n'Isi nke 5, na-eme nnyocha nwere ike esiwanye chepụta ma wuo digital nwere na efu variable-akwụ ụgwọ, a na-eri ihe owuwu nke na-enyere nnọọ nnukwu nnwale. Ka ike na-edebe, ikike n'usoro perturb ọ ga-akwụsị na-eto eto.
Na ihu nke a ụba ike, na-eme nnyocha na-eche ihu ekwekọghị na overlapping iwu, iwu, na norms. Otu akwụkwọ na nke a inconsistency bụ na ike nke dijitalụ afọ na-agbanwe ọsọ ọsọ karịa iwu, iwu, na norms. Dị ka ihe atụ, ndị Common Ọma ahụ (ahụ set nke iwu na-achị kasị ọchịchị kwụrụ ụgwọ nchọpụta na United States) agbanwechabeghị kemgbe 1981. mgbalị ime nke ugbua na Common Ọma ahụ malitere na 2011 ma ọ bụghị zuru ezu dị ka nke okpomọkụ nke 2016. A abụọ isi iyi nke inconsistency bụ na norms gburugburu nkịtị banye n'eluigwe dị ka nzuzo ka na nke na-arụrịta ụka banyere site na-eme nnyocha, amụma eso ụzọ, na mmume. Ọ bụrụ na ọkachamara n'ihe ndị a na-apụghị iru edo otutu mmadu kwenyere, anyị ekwesịghị ịtụ anya na ahụrụ anya na-eme nnyocha ma ọ bụ sonyere ga-eru na otutu mmadu kwenyere ma. A ikpeazụ isi iyi nke inconsistency bụ na dijitalụ afọ nnyocha na-esiwanye mbuaha n'ime ndị ọzọ, nke na-eduga nwere overlapping norms na iwu. Dị ka ihe atụ, mmetụta uche Contagion bụ a mmekota n'etiti a data ọkà mmụta sayensị na Facebook na a prọfesọ na gụsịrị akwụkwọ na-amụrụ na Cornell. Na Facebook na-agba ọsọ nnukwu nwere bụ na-eme ogologo oge ka ha ime na Facebook si usoro nke ọrụ, na n'oge ahụ, e nweghị atọ ndị ọzọ nyochaa nke nwere. Na Cornell ndị norms na iwu ndị dị nnọọ iche; fọrọ nke nta niile nwere a ga-enyocha site na Cornell IRB. Ya mere, nke set nke iwu kwesịrị ịchịkwa mmetụta uche Contagion-Facebook si ma ọ bụ Cornell si? Mgbe e nwere ihe ekwekọghị na overlapping iwu, iwu, na norms ọbụna ndị na-ebughị na-eme nnyocha nwere ike nwere nsogbu eme ihe ziri ezi. N'ezie, n'ihi na nke inconsistency, e nwere ike ghara ọbụna-a otu ziri ezi.
N'ozuzu, ndị a abụọ atụmatụ-amụba n'ike na enweghị nkwekọrịta banyere otú ya na ike ga-eji na-nke pụtara na-eme nnyocha na-arụ ọrụ na dijitalụ afọ na-aga na-eche ihu usoro ziri ezi ịma aka ndị na-abịanụ. Ọ dabara nke ọma, na-eme nnyocha chere ihu nsogbu ndị a na-adịghị mkpa na-amalite site ọkọ. Kama nke ahụ, na-eme nnyocha nwere ike ise amamihe sitere na mbụ mepụtara usoro ziri ezi ụkpụrụ na frameworks, na isiokwu nke abụọ na-esonụ na ngalaba.